Karibonetra sy vinaingitra : Manadio ny volo « dreadlocks »
Karazana tao-volo iray efa be mpanao eto amintsika ny « dreadlocks » na irony
Maska natoraly, miaro ny volo aminny hainandro
Misy fiatraikany ratsy aminny volo ny tara-masoandro sy hafanana, tahaka ny
Mandoko volo aminny kafe, betiravy
Ahitana singa afaka mandoko ny volo ao anatinny zava-maniry sasantsasany, toy ny betiravy, kafe, henné,
Hodi-doha mangidihidy, izao atao
Na tsy dia misy angadrano aza indraindray dia toa mangidihidy ny hodi-doha,
Manatsotra volo, tsy mila « brushing » sy « lisseur »
Maro ireo te-hiala aminny taovolo mahazatra rehefa fety. Ho anireo tsy afaka
Volo makina, matroka
asio vahona sy labiera !
Reraka ka mihamakina, mihamatroka, tsy salama mihitsy ny volo rehefa hampiasana produits
« Soins » natoraly ho anny volo miloko
Tena saro-pady ary mora simba ny volo rehefa avy nolokoina ka tsy nisy fikarakarana na « soins » natao taminy.
Volo « curly » : Koloy aminny akondro sy « lait » coco
Tena mahazo vahana ary be mpankafy eto amintsika aminizao ny taovolo « curly ».
Antony 7 tsy mampaniry ny volo
Maro amintsika no te-hanalava volo kanefa tsy mahazo ilay halavana tena hiriana. Antony maro no mahatonga azy ireny ka santionany aminizany ireto hampahafantarina antsika anio ireto.
Volo makiana loatra
ronono ampiasaina !
Toy ny menaka dia afaka atao tsara ny mampiasa ny vovoka amande douce hikolokoloana ny volo aminny fomba natoraly ary ampiarahana aminny ronono. Maska iray afaka atao aminy ity, mety tsara aminny fikolokoloana ny volo makiana.
FIANARANA MANAO VOLO, MAQUILLAGE,
Ho avy ao Mahajanga ny CharmElle Formation
Taorianny fangatahana maro be izay nataonireo mponina any aminny ilany andrefanny Nosy iny dia fantatra izao fa hanao fampianarana manokana ho anny mponina ao Mahajanga ny ekipanny CharmElle Formation.
Borosy fibangoana volo
misy asany avokoa
Fitaovana iray fampiasa be matetika ao an-trano ny borosim-bolo. Maro karazany izy ireny izay samy manana ny asany avokoa.
22-janv-2021 21-janv-2021 20-janv-2021 19-janv-2021 18-janv-2021 15-janv-2021 14-janv-2021 13-janv-2021 12-janv-2021 11-janv-2021 08-janv-2021 07-janv-2021 06-janv-2021 05-janv-2021 04-janv-2021 31-déc-2020 30-déc-2020 29-déc-2020 28-déc-2020 22-déc-2020 21-déc-2020 18-déc-2020 15-déc-2020 14-déc-2020 09-déc-2020 08-déc-2020 07-déc-2020 04-déc-2020 03-déc-2020 02-déc-2020 01-déc-2020 30-nov-2020 27-nov-2020 26-nov-2020 25-nov-2020 24-nov-2020 23-nov-2020 20-nov-2020 19-nov-2020 18-nov-2020 17-nov-2020 16-nov-2020 13-nov-2020 12-nov-2020 11-nov-2020 10-nov-2020 09-nov-2020 06-nov-2020 05-nov-2020 04-nov-2020 03-nov-2020 02-nov-2020 30-oct-2020 28-oct-2020 26-oct-2020 23-oct-2020 22-oct-2020 21-oct-2020 20-oct-2020 19-oct-2020